Igbo Mass Readings for December 26 2021, Ncheta Stivin Di aso
STEPHEN DI ASO: ONYE MBU EGBURU N’IHI OKWUKWE:
Dinwenu, n’ubochi taa, anyi na-eme emume ncheta ubochi Steven di nso batara n’otito ebighi ebi. O kpere ekpere maka ndi gburu ya n’oge o na-anwu. Nyere anyį aka inomi įdi mma ya ma hukwa ndiiro anyi n’anya. Site na Dinwenu anyi Jesu Kristi …
Ihe Ogugu nke mbu: 6:8-10; 7-54-59
Ihe ogugu ewetara na Oru ndiozi:
Ebe Stivin juputara na-amara na ike nke Mmuo Nso, o ruru oke oru itunaanya na ihe iribaama di iche-iche n’etiti ndi Juu. Mgbe ahu ufodu ndi Juu ndi si n’ulo nzuko nke “Ndi nweere onwe ha” (dika e si akpo ya) na nke ndi Sairiin, na nke ndi Elegzandria, na nke ndi si Silisia na Eshia biara rusa Stivin uka.
Ma ha enweghi ike ikwugidenwu amamihe ike nke Mmuo Nso Stivin ji agwa ha okwu. Mgbe ogbako ikpe ahu nuru ihe ndi a, iwe were ha nke ukwu n’ebe Stivin no ha wee taa ikikere eze, ma Stivin onye juputara n’ike nke Mmuo Nso lere anya n’eluigwe hu ebube nke Chineke. O si ha, “Lee! Ana m ahu ka e meghere eluigwe, na nwa nke mmadu ka o kwu na-aka nri nke Chineke. Ha weere oke olu tie mkpu, were aka kwuchie nti ha, were oso wakpo Stivin. Ha n’obodo ahu kpupu ya, were okwute t gbuo ya. Ndi akaebe ugha, ndi gburu Stivin, wusara uwe ha n’ukwu otu nwaokorobia a na-akpo Sol. Ka ha na-atugbu Stivin o kpere ekpere si, “Onyenweanyi Jesu nara mkpuruobi m!
ABUOMA NA AZIZA: Ps:31:3-4, 6, 7, 8, 17, 21.
Aziza: N’aka gi o Dinwenu ka m tinyere mmuo m.
Buru nkume nke mgbaba m,
ide nke ga-azoputa m!
N’ihi na i bu nkume m, na Ide m;
n’ihi aha gi dube m, ma chekwaba m. Az./
N’aka gi ka m tinyere mmuo m,
I gbaputala m Oseburuwa Chineke nke eziokwu.
Mana atukwasiri m obi m n’Oseburuwa
Aga m awuli elu, nwee añuri n’ime įhunaanya gi. Az./
Ka ihu gi chakwasi nwodibo gi, were ihunaaya gi zoputa m.
N’ihu gi ka i na-ezobe ha,
ka atumaatu ndi ajoomume ghara imetu ha. Az./
Ngozi diri onye ahu na-abia na-aha Onyenweanyi, Oseburuwa bu Chineke, o ji ihu o chi ele anyi.
Ihe ogugu ewetara n’ Ozioma di aso nke Matiu dere:
Jesu gwara ndi umuazu ya iri na abuo si: Zerenu ndi mmadu, n’ihi na ha ga-arara unu nye n’ulo ikpe; ha ga-apia unu ihe n’ulo nzuko ha di iche iche. Ha ga-akpugara unu ndi na-achi achi na ndieze n’ihi m. Unu ga-eji ohere ahu gbaara m akaebe n’ihu ha na ndi mba ozo. Mgbe ha raara unu nye, unu echegbula onwe unu banyere ihe unu ga-ekwu, ma o bu banyere otu unu ga-esi kwuo ya; n’ihi na a ga akuziri unu ihe unu ga ekwu n’oge ahu. Maka na o bughi unu ga-ekwu, kama mmuo nke Nna unu ga-esi n’ime unu kwuo okwu. Nwanne ga arara nwanne ya nye n’onwu; nna ga ararakwa nwa ya nye n’onwu. Umu ga ebili megide ndi muru ha, mee ka e gbuo ha. Mmadu niile ga-akpo unu asi n’ihi m, ma onye nogidesiri ike ruo n’isi njedebe ka a ga-azoputa.
Nna, anyi na-ario ka onyinye ndi a anyį na-ebute na ncheta nke Gi n’ubochi taa anyi na eme emume nnukwu oriri nke Stephen di nso kwesi na I ga-anara ha. Mezuoro anyį ihe ndi a site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.
Dinwenu, anyį na-ekele Gi maka ubara akara jhunaanya Gi n’ebe anyi no. Zoputa anyi site n’omumu nke Nwa Gį ma meekwa ka anyi na enweta anuri site n’ikwanyere Steven di nso, onye egburu n’ihi okwukwe, ugwù a. Anyi na ario ihe ndia site na Kristi Dinwenu anyį. Amen.
Daily Mass Readings for August 3 2021,Tuesday of 18th Week